Maqaallada Wendy Covey ee Martech Zone |
Maqaallada by Wendy Covey
20-kii sano ee la soo dhaafay, Wendy waxay ka caawisay boqolaal shirkado farsamo inay dhisaan kalsooni ayna buuxiyaan dhuumaha iibkooda iyagoo adeegsanaya waxyaabaha farsamada ku qanacsan. Shirkadeeda, Suuq geynta, waa wakaalad adeeg-buuxa ah oo suuq-geyn ah oo ka caawisa shirkadaha inay la xiriiraan macaamiisha, dhisaan kalsooni, iyo wadida natiijooyin waara iyadoo la adeegsanayo habka suuq-geynta waxyaabaha la caddeeyey.
Ma u Baahan Tahay Caawinta Suuqgeynta Dhageystayaasha Farsamada? Halkan Ka Bilaabo
Axad, Febraayo 7, 2021 Axad, Febraayo 7, 2021 Wendy Covey
Injineeriyadu ma aha xirfad inta ay leegtahay aduunyada oo dhan. Ganacsatada, tixgelinta aragtidan marka ay la hadlayaan dhagaystayaasha farsamada aadka u garanaya waxay noqon kartaa farqiga u dhexeeya in si dhab ah loo qaato iyo in la iska indhatiro. Seynisyahannada iyo injineerada waxay noqon karaan dhagaystayaal adag oo lakala jajabiyo, taas oo horseed u ah Xaaladda Suuqgeynta Warbixinta Injineerada. Sannadkii afaraad oo isku xigta, Suuqgeynta TREW, oo si gaar ah diiradda u saareysa suuq geynta farsamada